वित्तीय स्थायित्व र बाह्य सन्तुलन | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण वित्तीय स्थायित्व र बाह्य सन्तुलन
वित्तीय स्थायित्व र बाह्य सन्तुलन
लामो अवधिपछि आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति दुवै अत्यन्त सकारात्मक हुँदै गर्दा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र भने जोखिम उन्मुख हुन थालेका छन् । ती हुन्, बा≈य क्षेत्रको सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि पछिल्लो प्रतिवेदनमा विस्तारित आर्थिक र मौद्रिक नीतिकका कारण बाहिरी असुन्तलन, मुद्रास्फीति र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको प्रमुख चुनौती नै भुक्तानी असुन्तलन हो । लामो समयसम्म विप्रेषण र अनुदानले धानेको व्यापारघाटा यो आवदेखि धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको अनुपातमा वस्तु आयात १० वर्ष अगाडि २७ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा आइपुग्दा ४१ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ हो, रू. १०० बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गर्दा रू. ४१ बराबरको वस्तु आयात गर्नुपर्छ । यसले परनिर्भरताको चित्रण गर्छ । सरकारले सन् २०३० भित्र पुनः २५ प्रतिशतमा फर्काउने लक्ष्य राखे तापनि कठोर आयात नीति र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने बृहत् संरचनात्मक सुधारविना यो असम्भव देखिन्छ । संघीय प्रणालीका कारण पनि भुक्तानी सन्तुलनमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ । आयात वृद्धिदरकै अनुपातमा विप्रेषण र वैदेशिक अनुदान वृद्धि दिगो र सम्भव नभएकाले सुधारात्मक कदमहरू समयमै अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । सम्भवतः यो वर्ष देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ अर्ब डलर घट्न गई भारतीय रुपैया सँगको स्थिर विनिमय दरमा दबाब पर्न सक्छ । बा≈य क्षेत्रको असुन्तलनले ल्याउने जोखिम अन्य क्षेत्रले ल्याउनेभन्दा पृथक्, बृहत् र धेरै कठिन हुन्छ । अत्यन्त विषम परिस्थितिमा सार्वभौमसत्तामै पनि आँच आउन सक्छ । समयमै यस सम्बन्धी बृहत् सुधारात्मक कदम नचाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो गिरावट आई समस्त अर्थतन्त्रलाई अस्थिरतातिर धकेल्नेछ । गैरआवश्यक आयातमा यथाशीघ्र रोक लगाउनु र अनावश्यक सरकारी तथा गैरसरकारी खर्च तुरुन्त कटौती गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
गम्भीर जोखिम भनेको देशको वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता हो । विगत ४ वर्षमा औसतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा तथा मौद्रिक विस्तारले अनुत्पादक क्षेत्र मौलाउँदै गएको छ । घुम्दै फिर्दै कर्जा रियल इस्टेट क्षेत्र, व्यक्तिगत खपत र कर्जा हरितकरण गर्न प्रयोग भएको छ । अर्थतन्त्रको उत्पादन लागत अधिक र प्रतिकूल छ । वास्तविक उद्योगीहरू भने झन् सीमान्तकृत हुँदै छन् ।
प्रतिफलका आधारमा तय हुनुपर्ने जग्गाको मोल कृत्रिम रूपले आकाशिएको छ । वित्तीय क्षेत्र यसबाट कर्जा सुरक्षित भएको भ्रममा छ । जुन दिन जग्गाको कृत्रिम मूल्य र कर्जा बीचको चक्रीय सम्बन्ध तोडिन्छ देशको वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक तस्वीर छरपस्ट हुनेछ । कृत्रिम रूपले दबिएको निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक रूप बाहिरिनेछ र वित्तीय क्षेत्र र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै जोखिम तिर धकलिनेछ ।
राष्ट्र बैंकको कुनै पनि प्रतिवेदनमा पूँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे चर्चा गरेको पाइँदैन । केन्द्रीय बैंकले पूँजी वृद्धिलाई मर्जरको उद्देश्यसँग मात्र जोडेको देखिन्छ । अहिलेको २८ ओटा वाणिज्य बैंक हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि अत्यधिक हो । त्यसैले आर्थिक र मौद्रिक उत्प्रेरणा र सहजताद्वारा मर्जरमा जान प्रेरित गर्नुपर्छ । पूँजी वृद्धिका कारण कृत्रिम रूपले उचालिएको शेयर बजार नराम्रोसँग थचारिएको छ । पूँजी वृद्धिले निम्त्याएको आक्रामक कर्जा लगानीका कारण देशको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पु¥याएको छ । अनुत्पादक आयात बढाई बा≈य सन्तुलनमा नकारात्मक असर पारेको छ । अर्थतन्त्रको हरेक कारोबार र गतिविधिमा अर्थतन्त्रका वाहकहरूको उत्प्रेरणा र आकांक्षाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । पूँजी वृद्धिका कारण ऋण लिएर पूँजी थपेका लगानीकर्तालाई बैंकको महँगो ब्याजसहित साँवा पनि तिर्नु परेको छ भने पूँजी वृद्धि अगाडि पाएको २८ प्रतिशतको प्रतिफल पूँजी वृद्धिपश्चात् १५ प्रतिशतमा खुम्चिनु परेको छ । अधिक पूँजीका कारण हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्न सक्ने आधार निक्कै बढेको छ । सो सम्भावना अनुसार लगानी नगरे त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा शेयरधनीको प्रतिफलमा पर्छ र व्यवस्थापन जवाफदेही हुन्छ । तर, सम्भावना अनुसारको स्रोतसाधन सृजना गर्ने र जुटाउने क्षमता हाम्रो अर्थतन्त्रको छैन । पुस मसान्तको आँकडा हेर्दा रू. २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी पूँजी निष्क्रिय रहेको छ भने उक्त पूँजीलाई आवश्यक पर्ने रू. २३ खर्बको स्रोतसाधन जुटाउन अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा अर्को ४ वर्ष लाग्ने छ । बेसल ३ अनुसार पूँजी पर्याप्तता ८५ हुनुपर्नेमा अहिले १४ दशमलव १५ हुनुले वित्तीय क्षेत्रमा अधिक पूँजी थुप्रिएको पुष्टि गर्छ । राष्ट्र बैंक लगायत अन्य नियामक संस्था पनि अधिक पूँजीको अवसर लागतका बारेमा मौन छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा फसेको रू. २ खर्ब ३० अर्ब बराबरको अतिरिक्त पूँजी अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए अर्थतन्त्र निक्कै चलायमान हुने थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा आक्रामक लगानी र निष्क्रिय कर्जा निक्कै बढी हुनुपर्ने अनुमानका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पूँजीको आधार बलियो हुनुपर्ने र बढाउँदै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई आवश्यकभन्दा धेरै पूँजी बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिसकेकाले पूँजी वृद्धिको साटो बैंकिङ क्षेत्रलाई अनुशासित र दिगोे बनाउनु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकासमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । झीनामसिना कुरामा नअल्झी सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट माथि उठेर अर्थपूर्ण रणनैतिक, गम्भीर र महŒवपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त दुर्लभ चिज राजनीतिक स्थिरताको हरसम्भव उपयोग गरी न्यून मुद्रास्फीतिका जगमा औसतमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्दै जनतालाई विकासको अनुभूति दिनु आवश्यक छ । वित्तीय स्थायित्व र भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको जोखिमका पाटाहरूलाई नीतिगत रूपमा शीघ्र सम्बोधन गर्दै देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको पथमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् र लभ्ली प्रोफेशनल विश्वविद्यलाय पञ्जाबबाट अन्तरराष्ट्रिय अर्थशास्त्रमा पीएचडी गर्दै छन् ।
Brilliant analysis very true write up about artificially hiked land prices in Nepal which doesn’t support in term of practicality in the international market value.